Shiinaha Shiinaha Xiinka emulsifier Warshadaha iyo Warshadda Muhiimka ah | Hangzhou Sax
Qalabka Ultrasonic Lab
Nidaamka Wareegga Xiinka Yar
5L Nidaamka Wareegga
10L Nidaamka Wareegga
20L Nidaamka Wareegga
Nidaamka Wareegga Muraayadda
Nidaamka Wareejinta Birta ahama
Qalabka Xiinka Warshadaha
Nidaamka Wareegga Xiinka Maskaxda Warshadaha
Nidaamka Wareegtada oo Kala Duwan
Nidaamka Wareegtada Joogtada ah
Customized Haanta ahama
Guud ahaan Xalka Naqshadeynta iyo Dayactirka Badeecada
Kala firidhsan Kaarboon Nanotubes
Kala firidhyada saxarka
Soo saarista CBD
Neefsashada Saliida ee CBD
midabada dhirta Xiinka ee Mashiinka soo saarida pectin
Xiinka emulsifier saliida CBD muhiim u ah
Qalabka ultrasonic ee shaybaarka leh sanduuqa aan codka lahayn
Qalabka dareeraha ah ee ultrasonic
Qalabka Soosaarida Xiinka Warshadaha
qalabka loo yaqaan 'graphene dispersion qalabka'
Qalabka emulsifying Ultrasonic ee ka shaqeynaya biodiesel
Qalabka soosaarida dareeraha Ultrasonic
Sonicator baaritaanka ultrasonic
Xashiishka laga soosaaray (CBD, THC) waa hydrophobic (ma aha biyo-ku milma). Si looga adkaado ka-qaadis la'aanta Cannabinoids-ka biyaha si loogu shubo waxyaalaha la cuni karo, sharaabka iyo kareemada, waxaa loo baahan yahay hab habboon oo emulsification ah.
Xiinka emulsifier-ga saliida leh ee loo yaqaan 'CBD Ultimate essential emulsifier' wuxuu adeegsadaa awooda sheer ee ultrasonic cavitation si loo yareeyo cabirka dhibcaha ee cannabinoids si loo soo saaro nanoparticles, taas oo ka yaraan doonta 100nm. Ultrasonics waa tikniyoolajiyad ballaaran oo loo adeegsado warshadaha dawooyinka si loo sameeyo biyo xasilloon nanoemulsions.
Saliida / Cannabis Cannabis Emulsions - Nanoemulsions waa emulsions leh cabir yar oo dhibco ah kuwaas oo leh waxyaabo badan oo soo jiidasho leh oo loogu talagalay sameynta cannbinioid oo ay ku jiraan heer sare oo cad, xasillooni iyo nafsi yar. Sidoo kale, nanoemulsions ay soo saaraan falanqaynta ultrasonic waxay u baahan yihiin xoog saar hooseeya oo u oggolaanaya dhadhanka ugu fiican iyo caddaynta cabitaannada.
Geeska daawaha ee Titanium, taangiyada dhalooyinka.
Xakamayn karaa 10L dareere ah, laga bilaabo
Xakamayn karaa 30L
dareere ah, ka
JH-BL5L / 10L / 20L, u dhigma qaboojiyaha.
1.Sababtoo ah dhibcaha CBD waxaa loo kala firdhiyey nanoparticles, xasilloonida emulsions si weyn ayaa loo kordhiyay. Emulsions-ka Ultrasonically soo saaray badanaa iskiis ayey u deggan yihiin iyada oo aan lagu darin emulsifier ama surfactant.
2.Waxaa saliid CBD ah, nano emulsification waxay hagaajineysaa nuugista cannabinoids (bioavailability) waxayna soo saartaa saameyn qoto dheer. Sidaa darteed qiyaasta alaabooyinka xashiishka ee ka hooseeya waxay gaari karaan saameyn isku mid ah.
Nolosha qalabkayagu waa in ka badan saacadaha 20,000 waxayna si joogto ah u shaqeyn karaan 24 saacadood maalintii.
Xakamaynta isku dhafan, bilow hal-fure ah, hawlgal fudud. Wuxuu ku xirmi karaa PLC.
Hore: 20Khz ultrasonic faafiya mashiinka homoegnizer
Xiga: midabada dhirta Xiinka ee Mashiinka soo saarida pectin
Qalabka emulsification saliida CBD CBD
aaladda emulsification saliida xashiishad f ...
mashiinka emulsification saliidda nano CBD
Hangzhou qiray Makiinado Co., Ltd.